မမေ့သောအညာဟင်းလျှာများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » မမေ့သောအညာဟင်းလျှာများ
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Aug 21, 2011 in Food, Drink & Recipes | 24 comments
စားကောင်းပြီးခံတွင်းတွေ့ မယ့် အမေ့့အလွမ်းပြေ ခပ်ဆန်းဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင်ငရုတ်သီးချက်စားကြရအောင်နော်။
ခုလိုရာသီလေးနဲ့ အကိုက်ဖြစ်တဲ့ အပြင်အမေ့ လက်ရာဟင်းတွေ ကတော့..တန်ဖိုးမများလှပါဘူး.။
..ကျနော်တို့ တွေ ဘယ်နိုင်ငံ ကို ပဲရောက်နေရောက်နေ.. ဘာအစားအစာတွေ ပဲ စားနေရ ပါစေ..၊ .ဘယ်လိုဘဲ အကောင်းစားတြွေ စားရပါစေ
အမေ့ ဟင်းလေးတွေ ကိုတော့ မှီမယ် မထင်မိပါဘူး..။ အစပ်အဟပ်တည့်လှတဲ့ အမေ့ လက်ရာအညာဟင်းလေး တွေကို သတိရလွမ်းဆွတ်မိကြမှာပါ..။
အသားတု (သို့) မြေပဲ
ရပါတယ်။ ရေနဲနဲထည့်ပါ။ မြေပဲနူးပြီးပျော့သွားအောင်အတွက်ပါ။
ငရုတ်သီးတွေနွမ်းရင်တော့ ကျက်လောက်ပြီဖြစ်တာမို့အပေ့ါငံမြည်းပြီးစားလို့ရပါပြီးနော်… စပ်စပ်လေးနဲ့စိမ့်စိမ့်လေးပေါ့..
အဲဒီဟင်းလေးနဲ့ခရမ်းချဉ်သီးကိုထူထူလှီး၊ ကြက်သွန်နီနဲ့ အချဉ်လေးဆမ်းပြီးသုပ်ထားတာလေး တွဲစားလိုက်ရင်တော့ကောင်းမှကောင်းပါဘဲနော်..
ခဏလေးစောင့်အုံးနော် လိုက်ဖက်မဲ့ပဲနီလေးကိုရေဆေး…..ရေ အနည်းငယ်ထည့် မီးဖိုပေါ်တင် ဆူပြီး ပဲနူးလာလျှင်ပဲကြာဇံ အနည်းငယ်ခပ် ကြက်သွန်နီဆီချက်ကို ထည့် ဆားအနည်းငယ်ထည့်………ပူပူနွေးနွေး ပဲဟင်းချိုလေးရပါပြီနော် .။
အမေ့ လက်ရာများမှာဈေးသို့ သွားဝယ်ရန်ပင်မလိုပါ..အညာမှာခြံဝိုင်းထဲ ခူးရသောဟင်းရွက်များသာဖြစ်သည်၊
ဆူးပုတ် နုနု နဲ့ ဆန်မုန့် ဟင်းချို
ခရမ်းချဉ်သီး ငါးပိချက် ကလအော် ငါရုပ်သီး နဲ့ချက်။
အညာနို့ ခဲ ခရမ်းသီးနဲ့ ချက်
ခရမ်းခေါင်းသီး မီးဖုတ် သုတ်
မျှစ်ကို ငါးပိနဲ့ ကြော်
ဂေဇတ်..မိတ်ဆွေတွေဟင်းကစပ်စပ်လေးနဲ့ စားမြိန်တော့..အစပ်ပြေအညာအလွမ်းပြေမုံလေးပါထည့် ကြွေးအုံးမည်…
တညစိမ်ထားတဲ့ ကောက်ညှင်းဆန်ကို ကြိတ်။
ခဲသွားသော မုံ့နှစ်ကို ဆော်ဒါထည့်ပြီး နှဲ။
ထို့နောက် ဆီများများတွင် ထည့်ကြော်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကြော်ပြီးသား မုံ့လက်ကောက်ကွင်းကို ထန်းလျက်ရည်တွင် စိမ်ပြီး ပြီး
အသင့်လုပ်ပြီးသားမုံ့လက်ကောက်ကွင်း လေးတွေလည်း ကြိုက်သလောက်စားသွားပါ
ဂေဇတ်ကလူတွေ က နတ်တွေနော်..အငွေ့ ဘဲရှူ
shweaeim si has written 115 post in this Website..
View all posts by ရွှေအိမ်စည် →
Shwe aein si,it will tough everybody’s appetite!
I feel hungry now.Please share ……
ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန် အဲလိုလာလာ တင်ရင် အားကြီးစိတ်ဆိုးသဗျ
ကျေးဇူးရှင်လာတင်တဲ့အချိန်က..နေ့ လည် ၂ နာရီကျော်….
ကိုယ်လဲ ငါးပိချက်ရယ်..ငါးကြော်နှပ်ရယ်နဲ့ဘေးဆိုင်က ၀ယ်ပြီးကြိတ်နေတဲ့ အချိန်မိုလို့ ..တော်ကာကျတယ်..
နို့ မို့ ဆို….အကုသလိုလ် များဒယ်….ဗျာ..
အထဲက “မျှစ်ကို ငါးပိနဲ့ ကြော် ”ဆိုတာ စားချင်တယ်..ပြီးတော့
“ခရမ်းချဉ်သီး ငါးပိချက် ကလအော် ငါရုပ်သီး နဲ့ချက်။”..ဆိုတာလဲ ဆွဲချင်တယ်..သခွားသီးရေဆေးပြီး..
တဂျွတ်ဂျွတ်နဲ့ဆွဲလိုက်ရင်တော့ ..ကွက်တိပဲ.
ပြောရင်းနဲ့ တောင် သရေကျလာပြန်ပြီ…ဂွီ..
ပြောရရင်.. ဒီနေ့ ဆွမ်းလောင်းဖို့ ၀က်သား ၄ပိဿ မနေ့ညက ချက်ပါတယ်။ မနက်ကတော့ ဆွမ်းခံ သံဃာ ၁၀၅ပါး လောင်းလိုက်ရပါတယ်။ ၁၀၆ ပါးမြောက်ကတော့ ဟင်းကုန်သွားလို့ မုန့်ပဲ လောင်းလိုက်ရတယ်။
မနက်က ဆွမ်းလောင်းပြီးတော့ နက်ဖန် ဥပုသ်နေ့ အတွက် ၀က်ခြေထောက် ၅ပိဿ နဲ့ ငါးကျဉ်းကြော် ၁ပိဿ ငါးမွေထိုးကျက်တင် ကြော်ချက် ချက်ပါတယ်။
၀က်သားခုတ် အိုးထဲ ထည့် ဆီထည့် မီးနဲ့ တည်.. မကပ်အောင် မွေပေး ပဲငံပြာရည် အနောက်ရည် နဲ့ ဆား သကြား အချိုမှုန့် ထညက် ကြက်သွန်ဖြူ ထည့်..
အိုးမကပ်အောင် မွေပေးရင်းနဲ့ အသားတွေ အကုန် အပူထိသွားရင် အိုးလေးဖုံး မီးလေး အေးအေး နဲ့ ဆက်သာ တည်ထား.. ဆူပွက်လာပြီး ရေခမ်းရင် ရပြီ။ (အိုးကြီးကြီးနဲ့ အများကြီး ဆိုတော့ လက်တော့ ညောင်းတယ်)
ငါးကျဉ်းကြော် ကတော့ ငါးတွေ မွန်း ဆားနယ်.. ဆီပူပူမှာ မီးအေးအေးနဲ့ ကြော်.. ၀ါးလိုက်တိုင်း မွပြီး စားပြီးရင် စားချင်သွားမဲ့ ငါးကျဉ်းကြော် ကြွပ်ကြွပ်လေးတွေ ဖြစ်ပါလေတော့သည်။
ငါးမြွေထိုး ကို ဒီတိုင်း ဈေးထဲက ၀ယ်ပြီးတော့ မီးသွေးမီးဖိုး မှာ ကြပ်တင်ပါတယ်။
ငါးက ထွက်တဲ့ အချွဲလေးတွေ အကုန် မီးနဲ့ ပြောင်သွားပြီးတော့ သန့်သလောက် ရှိတဲ့ အခါမှာတော့ အတွင်း ကျက်အောင် မိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖိုနဲ့ ၂မိနစ်လောက် အပူပေးလိုက်ပါတယ်။
ထို့နောက် ငါး ကို အသွားနွင်ပြီးတော့ ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီသတ် ပြီး ငါး အသားတွေ ကို ချက်.. ခြောက်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ ငရုတ်သီး ထည့်ပြီးချက်ပါတယ်။ ထို့နောက် မန်ကျဉ်းမှည့်ကို အရည်ညှစ်ပြီးတော့ ထည့်လိုက်ပြီး ခြောက်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ စားလို့ရပါပြီ။
ငါးကြပ်တင်ထားတဲ့ အနံလေးနဲ့ ချဉ်ချဉ် စပ်စပ် နဲ့ ငါးအရသာ ချိုချိုလေးနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဟင်းတပွဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။
း၏ဒါကြောင့်ငရုပ်သီးပွ..တဆယ်သား၂၀၀ နဲ့ ဝယ်.ပဲနီလေး၂၀၀ ကြာဇံ ၁၀၀ ဘိုးနဲ့ ဟင်းချက်လိုက်ရတာပါဟာ…။
၀က်သားဟင်းနြ့ လည်း…တို့ ဟင်းမလဲနိုင်ပေါင်တော်..
တို့ အိမ်ကြွ တဲ့ ဘုန်းကြီးတော့..စပ်ပြီသာမှတ်ကရောဘဲးးး
ငရုတ်သီး ကြီးပဲ ဆွမ်းလောင်းနေရင် နောင်ဘ၀ ငရုတ်သီး အစားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆုတွေ ဘာတွေနိုင်တယ်။ ငရုတ်သီး မင်းသား ဆု ဆိုလား ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မြင်ဖူးတယ်။
ကောက်ညှင်းဆန် ကို တည ရေစိမ်ပြီးမှ ကြိတ်တယ် ဆိုရင် အရသာ အချဉ်ပေါက် တဲ့ ဘက်ကိုသွားတယ်နော်..
အခု လွယ်လွယ်ကူကူ ကောက်ညှင်းမှုန့် ၀ယ်လို့ ရနေတာပဲ.. တခါတည်း ရေနဲ့ နယ်ပြီး ကြော်ပါလား။
ကင်းပုန်သီးကြော်လေး စားချင်လိုက်တာ။ ပဲကြီးဟင်း၊ ဂွေးတောက်ဟင်းချိုနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ငါးပိချက်လေးရော ဝေးနေတာ ကြာလှပြီ။
ကျနော်ဘုန်းကြီးဝတ်ရင် ဆူးတို့အိမ်လာပြီးဆွမ်းခံမယ်နော် ………….. အဟဲ ..။
နောက်တာပါ ကျနော်ဝတ်ရင် အစားအသောက်ကို အရသာခံပြီးစားလေ့မရှိပါဘူး …။
အလိုက်မသိတဲ့ တကာ တကာမ များက တခါတလေ အရှင်ဘုရား ဘုန်းပေးလို့ကောင်းလားဆိုပြီး
အဲဒီတော့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ကြည့်ပြီး သင့်တင့်ပါတယ်လို့ ဖြေလိုက်ပေါ့။
အတင်းကြီးမေးလာရင် ဘုန်းကြီးကို ဒါမျိုး မမေးရဘူး။ အဲလိုသာ ခပ်တည်တည် နဲ့ ဖြေလိုက်..
စားချင့်စရာတွေချည်းဘဲဆိုတော့ ဘာစားရမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူး။အကုန်လုံးစားကောင့်မယ့်အစာတွေချည်းပါဘဲ။ဟိ ဟိ။မရွှေအိမ်စည်က အန့ံဘဲ ရအောင်လုပ်ပြသွားတယ်။
စားမှာဘဲ ၀ါးမှာဘဲ ငါ့ကိုလာမတားနဲ့ ဗိုက်ပေါက်အောင်စားမယ်…………………………………
မနေ့ ကဟိုလူ ကဖား(ကပ်ဖားတွေ )ရေးတော့လေ..ကျနော်ဖားကင်နံလေးတောင်မွေးလာတယ်ခံစားရတယ်ဗျာ
ကိုပေါက်နဲ့ ဦးကြောင်..တော်တော်ပျော်တတ်တယ်နဲ့ တူတယ်…
မမရွေအိမ်စည် မုန့်လက်ကောက် အားပေးလိုက်တယ် အချိုတည်းတဲ့ သေဘာပေါ့ ……ဟင်းချက်ပုံချက်နည်းလေးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှာပဲ ( ကိုယ်တိုင်ချက် ကိုတိုင်ရိုက် ကိုယ်တိုင်ရေး) ဖြစ်စေချင်တာလေးပြောကြည့်တာပါနော့ …နောက် အညာနို့ ချက်နည်းလေးသိချင်ပါတယ်ဗျာ..ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့မဟုတ်ဘူးလေ…
ပုံထဲက လယ်ကြွက်ကင်၊ ဖားကင်ပုံကြီးက အကြီးချဲ့ထားတာလား၊ စားတော့စားချင်တယ် ဒါပေမဲ့ ကြောက်စရာကြီး။ ကျနော်တို့လူတွေကို ဘီလူးတွေဖမ်းစားရင် အဲလိုပဲ တွဲလောင်းချိတ် ကင်စားကြမယ်ထင်တယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ ရေခဲရိုက်ထားတဲ့ ဖါးပေါင်ငါးချောင်းလောက် ၁၂အောင်စကို ၅ဒေါ်လာနဲ့တမတ်လောက် ပေးရတယ်…။ ကြွက်သားတော့ မတွေ့ဘူးသေးဘူး..။ ယုန်သား၊ ဂျိုးသားလည်းရှိတယ်..။
ပုန်းရည်ကြီးနဲ့ ကန်စွန်းရွက်၊ လက်ပံပွင့်ခြောက်လေးတွေတောင်ပါသေး
အဲဒီဟင်းလေးကို ငြုတ်သီးဆားထောင်းလေးနဲ့ဆိုလည်း ဂွဒ်၏ ဂွဒ်၏
နတ်တွေဆိုပြီး အငွေ့ပဲရှုဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ
ချောကလက်လည်းမကြိုက်ဘူုး..မဲ လို့ ဘဲ..
ကျန်တာတွေ တော့မချက်တတ်ပါဘူး..ဟိုပစ်ဒီပစ်…ဟင်းလောက်ဘဲ ရတယ်..
ထမင်းဆိုင်ထဲ ကတော့..ဧဒင်ကစာတွေ ကူးလာတာ..ဟိဟိ
ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး စားချင်စိတ်ကို မနည်းထိမ်းလိုက်၇ပါကြောင်း
အငွေ့လဲ ရှူမရတော့ ဒုက္ခရောက်သွားပါကြောင်း
copyကူးပြီး print ထုတ်သွားပါကြောင်း။ တယောက်သောသူကိုချက်ကျွေးရန်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ ”မျှစ်ကို ငပိနဲ့ကြော် ” လက်တည့်စမ်းလိုက်တာ ကောင်းလွန်းလို့ အိမ်ကသူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်မချက်တာလို့မယုံဘဲ ၀ယ်စားတယ်ချည်းမှတ်နေလို့၊ သူတို့မယုံပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် အထင်ကြီးသွားသေးတယ်။
ဲမြန်မာဒိုးနတ်လည်း ပါသဟ။ (မုန့်လက်ကောက်ကို စတန့်ထွင်ထားလို့ မြန်မာ ဒိုးနတ်လို့ တင်စားလိုက်တာ။)